Heat and Run - Love Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Hafanana sy fihazakazahana Average 3.5 / 5 avy amin'ny 20
N / A, manana fomba fijery 91.9K
Fitiavan-dehilahy, tantara an-tsary, tantara an-tsehatra, Fantasy, Tifitra iray, Smut, Webtoons, Yaoi
Ireo mpampiasa 47 dia nanamarika ity
'Ro Jaeho' sy 'Joo Ian' dia zanak'ireo fianakaviana Alpha izay fahavalo nianiana. Na eo aza izany, ny zanak'izy ireo kely 'Joo Jihwan' sy 'Ro Miho' dia ao anatin'ny fifandraisana…?
Nanatevin-daharana ny fetin'i Miho sy Jihwan tany Amerika i Ian ary nihaona tampoka tamin'i Jaeho.
Misy fihenjanana hafahafa eo amin'ny rivotra eo anelanelan'ny zoky lahy… “Joo Ian, ianao…
Tsy mba maimbo toy izany ianao taloha! ”
Fantatra sy tantaram-pitiavana mahafinaritra be dia be manga tafahoatra eto!
Chapter 49 Jolay 24, 2021
Chapter 48 Jolay 24, 2021
Chapter 47 Jolay 24, 2021
Chapter 46 Jolay 24, 2021
Chapter 45 Jolay 24, 2021
Chapter 44 Jolay 24, 2021
Chapter 43 Jolay 24, 2021
Chapter 42 Jolay 24, 2021
Chapter 41 Jolay 24, 2021
Chapter 40 Jolay 24, 2021
Chapter 39 Jolay 24, 2021
Chapter 38 Jolay 24, 2021
Chapter 37 Jolay 24, 2021
Chapter 36 Jolay 24, 2021
Chapter 35 Jolay 24, 2021
Chapter 32 Febroary 7, 2021
Chapter 31 Febroary 7, 2021
Chapter 30 Febroary 7, 2021
Chapter 29 Febroary 7, 2021
Chapter 28 Febroary 7, 2021
Chapter 27 Febroary 7, 2021
Chapter 26 Febroary 7, 2021
Chapter 25 Febroary 7, 2021
Chapter 24 Febroary 7, 2021
Chapter 23 Febroary 7, 2021
Chapter 22 Febroary 7, 2021
Chapter 21 Febroary 7, 2021
Chapter 20 Febroary 7, 2021
Chapter 19 Febroary 7, 2021
Chapter 18 Febroary 7, 2021
Chapter 17 Febroary 7, 2021
Chapter 16 Febroary 7, 2021
Chapter 15 Febroary 7, 2021
Chapter 14 Febroary 7, 2021
Chapter 13 Febroary 7, 2021
Chapter 12 Febroary 7, 2021
Chapter 11 Febroary 7, 2021
Chapter 10 Febroary 7, 2021
Chapter 9 Febroary 7, 2021
Chapter 8 Febroary 7, 2021
Chapter 7 Febroary 7, 2021
Chapter 6 Febroary 7, 2021
Chapter 5 Janoary 21, 2021
Chapter 4 Janoary 21, 2021
Chapter 3 Janoary 21, 2021
Chapter 2 Janoary 21, 2021
Chapter 1 Janoary 21, 2021
Olona tsara tarehy